သရက်သီးသုပ် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ကြက်သွန်နီ+ဖြူ ဆီချက်............၂ ဇွန်း(ထမင်းစားဇွန်း)
မြေပဲထောင်း ........................၂ ဇွန်းခန်.
ပဲကျက်မှုန်. ...........................၁ ဇွန်းခန်.
ငရုတ်သီးလှော်မှု န်. ................၁ ဇွန်း( လက်ဖက်ရည်ဇွန်း )
ဆား+ဟင်းခတ်မှု န်.................လိုအပ်သလို .....
သရက်သီးကို စိန်ခလုတ်အကြီးစားနဲ.ခြစ်ပြီး..ဆားပါတဲ့ရေမှာ ၃ နာရီခန်.ရေစိမ်ထားပါ။
ထိုစဉ်အချိန်အတွင်း ကြက်သွန်နီ + ဖြူ ကိုနနွင်းလေးပါသည်ဆိုရုံနှင့် ဆီချက် ချက်ထားပါ။
ပုစွန်ခြောက်ကိုလည်း..ကြိတ် (သို.) အမှုန်.ရအောင်ထောင်းပါ။
ကြက်သွန်နီ ၊ ဆီချက် ၊ မြေပဲထောင်း ၊ပဲကျက်မှုန်. ၊ ပုစွန်ခြောက်မှုန်. ၊ ငရုတ်
သီးလှော်မှုန်. ၊ အရသာလိုအပ်သလိုထည့်ပြီး..ခပ်ဖွဖွလေးနှံ.အောင်နယ်ပေးပါ။